”ရာသီကြမ်းမှာမှ စိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့ကဗျာ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » ”ရာသီကြမ်းမှာမှ စိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့ကဗျာ”	11
Posted by Thint Aye Yeik on Dec 8, 2014 in Arts & Humanities, Creative Writing, My Dear Diary, Poetry | 11 comments
ထူလို့ . . . အမ်းလို့ . . .
ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ. . .
နောက်ဆုံးတော့လည်း. . . .
ကိုယ့် ကိုယ်တွေကို ရေလောင်း
ကိုယ့် ကိုယ်တွေကို ပေါင်းသင်လို့ . . .
နှုတ်သင့်တာ နှုတ် ဖြုတ်သင့်တာ ဖြုတ်ပြီး
ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ရေကြည် မြက်နု….အခု ဖြစ်ရမယ်. . .ပေါ့။
ဒီသက်တမ်းမှာ . . .
လူဖြစ် ရှုံးရှုံး / မရှုံးရှုံး ။ ။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၇
ည ၇ နာရီ၊ ၆ မိနစ်
Thint Aye Yeik has written 599 post in this Website..
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ငင်
ဒီကဂျာအတွက် ပုံလေး လုပ်နေတုန်း ရှိသေး။
aye.kk says: ရာသီကြမ်းမှာ
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အမြဲစိမ်းတောလေးထဲ သွားနေရင်ကော
ဒါမယ့် သစ်ပင်တွေ ခုတ်မယ့်သူ မလာတဲ့ တောမှ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ရေမကောင်း
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: ရေမမြင့်ပေမယ့် ကြာတင့်တဲ့ သဘောနဲ့
ကဗျာတွေ တော့ ဖူးပွင့်နေကြပါတယ်
ရင်နာစရာအကြောင်းတွေ ရေးထားရတဲ့ကဗျာတွေ. . .
Kaung Kin Pyar says: လာဖတ်သွားပါတယ် ဆက်ဆက်ရေ….
ရင်နာစရာအကြောင်းတွေပဲ ရေးရေး…ပျော်စရာအကြောင်းတွေပဲ ရေးရေး…ကဗျာဆိုတာလဲ အနုပညာတစ်ခုပါပဲ…
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: လာဖတ်သွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး ခင်ဗျ ။
CharTooLan says: ရာသီကြမ်းမှ စိုက်လိုက်တာဆိုတော့
ညည်းက ဘာကိုမျှော်လင့်သဒုံးးးး ??
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အပွင့်ကြမ်းကြမ်း….
အနံ့ စူးစူးပေါ့ကွယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: ကွကိုယ်ရေလောင်းပေါင်းသင်လိုက်တော့ ဘာပင်ဖြစ်သွားဒုံးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: အဟိ…
ဘယ်လို မေးခွန်းတွေပါလိမ့်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.